Shuruudaha Adeegga - YTpals
Siyaasadda Ka Noqoshada & Diiwaangelinta
View our Siyaasadda Soo celinta bogga wixii faahfaahin ah ee ku saabsan soo-celinta, iyo sidoo kale joojinta rukumadaada.
Macluumaad noocee ah ayaanu ururinaa?
Macluumaadka ayaan kaa soo aruurineynaa marka aad u qorto warside.
Markaad dalbaneyso ama diiwaangelinayso boggayaga, hadba sida ku haboon, waxaa laga yaabaa in lagu weydiisto inaad gasho cinwaankaaga: cinwaanka e-mail ama macluumaadka kaararka deynta.
Waxa aynu u isticmaalnaa macluumaadkaaga?
Mid ka mid ah macluumaadka aan u ururiyaan idinka waxaa loo isticmaali karaa in mid ka mid ah siyaabaha soo socda:
- Si loo socodsiiyo macaamil ganacsi
Macluumaadkaaga, ha ahaato mid guud ama mid gaar ah, lama iibin doono, beddelin, laguma wareejin doono, ama loo siinin shirkad kale sabab kasta ha ahaato, iyada oo aan la helin ogolaanshahaaga, oo aan ahayn ujeedada dhabta ah ee bixinta alaabta ama adeegga la soo iibsaday.
- Si aad u soo dirto emayl xilliyeedyo ah
Cinwaanka emailka ee aad bixiso waxaa loo isticmaali karaa in laguugu soo diro macluumaadka, ka jawaabista su'aalaha, iyo / ama codsiyo kale ama su'aalo.
Waxaan hirgelinnaa tallaabooyin kala duwan oo amniga ah si aan u ilaalino amniga macluumaadkaaga shakhsiyeed markaad amar bixiso
Waxaan soo bandhigi karnaa isticmaalka xafiisyada amniga. Dhammaan macluumaadka xasaasiga ah ee la bixiyay waxaa loo gudbin karaa iyada oo loo marayo tiknoolajiyada Secure Socket Layer (SSL) oo dabadeedna lagu keydiyo diiwaanka bixiyeyaasha lacag bixinta ee loo yaqaan 'Payment Socket Gateway' si loo helo kuwa loo oggol yahay xuquuqda gaarka ah ee nidaamyada noocaan ah, waxaana looga baahan yahay inay xogta qarsoodi ahaadaan.
Ka dib markii macaamilka ganacsi ah, macluumaadka gaarka ah (kaararka deynta, lambarada amniga bulshada, dhaqaalaha, iwm) oo aan la kaydin doonaa on server our.
Ma waxaan isticmaalnaa cookies?
Haa (Kukiyada waa files yar in goobta ama wareejinta ay bixiyaha adeegga kombiyuutaro aad u adag la wado iyada oo loo marayo browser Web (haddii aad u oggolaadaan) oo awood u goobaha ama nidaamka adeeg bixiyayaasha in la aqoonsado your browser iyo qabashada iyo xusuusan macluumaad gaar ah
Dhammaan xirfadlayaasha iyo / ama ganacsiyada iyo / ama iibsiyada VIP xaq uma laha inay dib u soo celiyaan, oo si adag loo dhaqan geliyo. Tani waxay sabab u tahay in ay noqoto adeeg deg deg ah. Hawlgalkeena lacag bixinta waa 100% la sugay oo sharci ah, wax lacag ahna laguma sameyn doono iyada oo macaamiisha aysan ogalaan marka la iibsanayo.
Waxaan xaq u leennahay inaan diidno adeegga YTpals ee adeegsadayaasha si xun u adeegsada nidaamka
Annagu ma iibiso, ganacsiga, ama haddii kale lagu wareejiyo si ay dhinacyada ka baxsan macluumaadka shaqsiga lagu garan karo. Tani ma ka mid ah labada dhinac saddexaad isku halleeyey, kuwaas oo gacan nagu siiyaan ka hawlgala our website, qabashada our ganacsiga, ama aad qabsshada, inta dhinacyada kuwa ku heshiiyaan in ay macluumaadkan sii qarsoodi ah. Waxa kale oo laga yaabaa in aan sii daayo macluumaadka marka aan rumaysan sii daayo haboon tahay in ay u hoggaansamaan sharciga, dhaqan siyaasadaha site our, ama loo ilaaliyo annagaa leh ama dadka kale xuquuqdooda, hantida, ama ammaanka. Si kastaba ha ahaatee, macluumaadka booqdaha aan qofka lagu garan karo waxaa laga yaabaa in ay xisbiyada kale ee marketing, advertising, ama isticmaalka kale ee laga bixiyo.
Xiriirrada dhinaca saddexaad
Marmarka qaarkood, ansixinteena, waxaa laga yaabaa inaan ku darno ama u soo bandhigno badeecad ama adeegyo dhinac sadexaad ee boggeena internetka. Boggaga sadexaad ee sadexaad ayaa leh siyaasado gaar ah oo gaar ah. Sidaa darteed ma lihin wax masuuliyad ah ama masuuliyad ah mawduucyada iyo waxqabadyada boggaan la xiriira. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu dooneynaa inaan ilaalino sharafta boggayaga iyo inaan soo dhaweyno wax jawaab ah oo ku saabsan goobahan.
Xeerarkan internetka ee shuruudaha adeegga wuxuu quseeyaa oo keliya macluumaadka laga soo ururiyey boggayaga internetka oo aan ahayn macluumaadka la uruuriyay oo la ururiyey
Adigoo isticmaalaya boggayaga, waxaad ogolaaneysaa shuruudaha internetka ee adeegeena.
Isbedelada Shuruudaha Adeegga
Haddii aan go'aansano inaan bedelno Shuruudaha Adeega, waxaanu ku soo diri doonaa isbedelada boggan.